पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा नारायण कोइरालाको प्यानललाई भोट किन ? – Samacharpati Samacharpati पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको चुनावमा नारायण कोइरालाको प्यानललाई भोट किन ? – Samacharpati
पोखरा, २१ पुस । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघको ३३ औँ महाधिवेशन पुस २४ र २५ गते हुदैछ । अहिले संघको नेतृत्वको लागि नारायण कोइराला र विन्दु कोइराला सुवेदी चुनावी मैदानमा रहेका छन् ।
कोभिड– १९ का कारण व्यवसायीहरु समस्यामा परिरहेको यो विषम परिस्थितिमा नेतृत्वको अहम भुमिका हुने गर्दछ । यसै विषयमा व्यवसायीहरुसंग मत माग्दै गर्दा बाटोमा भेटिनुभएका अध्यक्षका उमेद्वार नारायण कोइरालालाई हामीले कुराकानी गरेका छौ। उहाँले समाचारपाटी डटकमसंगको कुराकानीमा उहाँले पोखरालाई अझै सुन्दर, सुसज्जित र विकसीत गर्न निजि क्षेत्रको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल लिने बताउनुभयो । उहाँले अहिले पोखरामा देखिएको पार्किङ, घरभाडा, कर लगायतका समस्यामा व्यवसायीको हितका लागि काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ पोखराकै जेठो संस्था हो, यसले व्यवसायीहरुको हकहितका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । यहि बिचमा अहिले ३३ औ महाधिवेशनमा मैले अध्यक्षको उमेद्वारी दिएको छु, म संग अरु साथीहरु पनि हुनुहुन्छ, मेरो टिम छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषिलाई पनि आफ्नो मोटो बनाएर अगाडी बढिरहेको अवस्थामा, यहाँको भौतिक संरचना देखि लिएर हरेक कुरामा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले हिजोका दिनमा पनि लबिङ गर्दै आएको थियो र अब आउने हाम्रो टिमले आवश्यक ठाउँमा लबिङ गरेर पोखरालाई कसरी सुन्दर, सुसज्जित र व्यवस्थित सहरको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मेरो एजेण्डाका साथ मेरो उमेद्वारी हो ।”
अहिले पोखराको बजारमा दक्ष श्रमिकको अभावले उद्योगधन्दा फस्टाउन नसकेको उहाँको बुझाई छ । पोखरामा पार्किङको समस्याले गर्दा व्यवसायीहरुलाई समस्या परेको छ, उहाँले भन्नुभयो – “दक्ष श्रमिकहरुको अभावले व्यवसायीहरुलाई समस्या भएको छ, फुटपाथको व्यवस्थापन अझै राम्रोसंग भईसकेको छैन । कोभिडको कारणले व्यवसायीहरुलाई अक्रान्त भईरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तिय संस्थासंग सौहार्दपुर्ण वातावरण बनाउने, कर लगायतका समस्यामा साथ दिने हाम्रो काम हुने छ ।”
सरकारसंग आफुहरु सधैं सहकार्य गरेर हिड्ने बताउदै सरकारले पनि व्यवसायीमैत्री नियम कानुन ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले पनि निजि क्षेत्रबाट धेरै सहयोग पाएको छ । देशको विकासका लागि सरकार र निजि क्षेत्रको उत्तिकै भुमिका छ तर निजि क्षेत्रलाई सहज हुने निती नियम सरकारले ल्याएन भने हामीले प्रतिपक्षको भुमिका निर्भाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हेर्नुहोस कोइरालासंग गरिएको यो कुराकानी तलको भिडियोमा ।
चिसो बढेसँगै हिल्सा प्रहरी चौकी सदरमुकाम सिमकोट फिर्ता